बीमा संस्थानको तीन आर्थिक वर्षको साधारणसभा सकियो, अब बीमा समितिको निर्देशन मान्ने - Arthatantra.com
बीमा संस्थानको तीन आर्थिक वर्षको साधारणसभा सकियो, अब बीमा समितिको निर्देशन मान्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले एकै पटक तीन आर्थिक वर्षको साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ ।
संस्थानको लामो समयदेखि बाँकी रहेको आ.व. २०६६-६७, २०६७-६८ र २०६८-६९ को लेखा परीक्षण तथा साधारणसभा गरिएको हो । संस्थाले आगामी असार मसान्तसम्म दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पु¥याउने भएको छ ।
संस्थानको सम्पन्न ३१ औं साधारणसभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गंगाराम कँडेलले नियामक बीमा समितिको पछिल्लो निर्देशन अनुरुप दुई अर्ब चुक्ता पूँजी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले संस्थानले सोही अनुसार चुक्ता पूँजी पु¥याउनका लागि पूँजी योजना तयार गरी अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिमा लागि पठाइएको जानकारी गराउनुभयो ।
विगत केही वर्षदेखि महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले संस्थानको व्यवसाय विस्तारलगायत अन्य गतिविधिहरुमा नराम्रो प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो ।
कोरोना प्रभावका बाबजुद पनि संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा सात अर्ब ५७ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद प्रिमियम संकलन गरेको उहाँले बताउनुभयो । सोही अवधिमा तीन अर्ब १९ करोड ८७ लाख दाबी भुक्तानी गर्नुका साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीवन बीमा कोषमा ३२ अर्ब ९३ करोड ६१ लख रहेको अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
संस्थानले आ.व. २०६६-६७ मा तीन अर्ब चार करोड चार लाख १६ अजार ८२३ आम्दानी गरेको छ भने २०६७-६८ मा तीन अर्ब ७८ करोड ७० लाख ७४ हजार ३१७ रुपैयाँ आम्दानी गरको छ । यस्तै २०६८-६९ मा तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख ८४ हजार २२७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
संस्थानले विगतमा ‘डस’ प्रविधिमा आधारित काम गरेकोमा अब डिजिटल प्रविधिबाट काम गर्न सक्ने भएको भन्दै संस्थानका प्रशासक कवि प्रसाद पाठकले आ.व. २०६६-६७ को तुलनामा पछिल्ला वर्षहरुमा बीमा क्षेत्रमा रहेका विविध चुनौतिहरुको सामना गर्दै संस्थानले व्यवसायमा उल्लेख्य बृद्घि गर्दै गएको बताउनुभयो ।
बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०६६-६७, २०६७-६८ र २०६८-६९ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरे सँगै साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । संस्थान, बीमा समिति, महालेखा परिक्षकको कार्यालय र अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा उक्त तीन आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । कतिपय पुराना हिसाव नभेटिएको तथा हिसाव कितावको रेकर्ड नै नष्ट गरेका कारण पनि लेखापरीक्षण हुन सकेको थिएन ।
आर्थिक वर्ष २०६६-६७, २०६७-६८ र २०६८-६९ को साधारणसभा सम्पन्न भएसँगै अर्को तीन आर्थिक वर्ष २०६९-७०, २०७०-७१, २०७१-७२ को पनि लेखापरीक्षकबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई गत असार ३१ गते स्विकृतिको लागि बीमा समितिमा पठाइ सकिएको संस्थानले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त भई आ.व. २०७२-७३, २०७३-७४ र २०७४-७५ को लेखापरीक्षण समयमा सम्पन्न गर्नका लागि पनि साधारणसभाले दुई जना लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ २७ आइतवार ०५:२० मा प्रकाशित
अघिल्लाे घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
पछिल्लाे किन्ने होइन त महालक्ष्मी विकास बैंकको ४ लाख १० हजार कित्ता सेयर ?